Ny Revolisiona Frantsay
Boky momba ny Revolisiona frantsay
Frantsay Revolisiona frantsay #1
Frantsay Revolisiona frantsay #2
Frantsay Revolisiona frantsay #3
Frantsay Revolisiona frantsay #4
Frantsay Revolisiona frantsay #5
Frantsay Revolisiona frantsay #6
Frantsay Revolisiona frantsay
Rakipahalalana frantsay Revolisiona
Fanontaniana frantsay Revolution
AKRosiana frantsay glosary AK
LZ glossary momba ny Revolisiona frantsay
Grika momba ny Revolisiona frantsay
Mpahay tantara momba ny Revolisiona frantsay
Sarintany Revolisiona frantsay
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - hetsika 1789-91
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - hetsika 1792-95
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - hetsika ho 1788
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - vondrona
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - hevitra
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - mpitarika
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - teny (I)
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - teny (II)
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay - teny (III)
Ny fahatsiarovana ny Revolisiona frantsay dia manontany
#ZNUMX ny frantsay frantsay
Fanadihadiana momba ny Revolisiona frantsay ho an'ireo vao manomboka
Ny Revolisiona frantsay dia manontany
Lohahevitra momba ny Revolisiona frantsay
Fihetseham-po frantsay Revolution
Revolisiona frantsay izay iza
Teny frantsay Revolisiona frantsay - hevitra
Teny frantsay Revolisiona - hetsika
Teny frantsay Revolisiona - olona
Teny frantsay Revolisiona - toerana
Teny frantsay Revolisiona
Ny Revolisiona Frantsay nanana saika ny zavatra rehetra ifaneraserantsika amin'ny revolisiona - royals mahery vaika, aristokratista feno fitiavan-trosa, hetra ambony, tsy fanam-bokatra, tsy fahampian-tsakafo, tantsaha noana, olona tia tanàna tezitra, firaisana ara-nofo, lainga, kolikoly, herisetra mihatra amin'ny radical sy weirdos, tsaho sy teti-dratsy, fampihorohoroana an'ny fanjakana. ary milina fanoratana loha.
Na dia tsy ny revolisiona voalohany amin'izao vanim-potoana maoderina izao aza, ny Revolisiona frantsay dia nanjary fepetra natao hanovana ny fikomiana hafa. Ny korontana ara-politika sy ara-tsosialy amin'ny taonjato 18 tamin'ny taonjato XNUMX dia nianatra olona an-tapitrisany - avy amin'ny manam-pahaizana hatramin'ny avo ka hatramin'ny mpianatra any amin'ny lise. The tafio-drivotra ao Bastille tamin'ny Jolay 14th 1789 dia lasa fotoana iray manamarina ny tantaran'ny tandrefana, antony manosika olona tonga amin'ny revolisiona. Ireo lehilahy sy vehivavy an'ny France revolisionera - Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Honorea Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre sy ny sasany - koa dia nianatra, nandinika ary nanazava. mpahay tantara nandany taonjato roa mahery mba hanombatombana ny Région Frantsay, miezaka ny hanapa-kevitra raha toa ka latsaka fandrosoana na fihodinana anaty barbariana.
Raha vao zohina dia jerena mivantana ireo antony nahatonga ny Revolisiona frantsay. Tamin'ny faramparan'ny taonjato 18 tamin'ny taonjato farany dia niaritra ny tsy fitoviana sy ny fanararaotana farany ny mponin'i Frantsa. Ny hierarchy sosialy nanjaka dia mitaky ny Tombontsoa fahatelo, olo-tsotra amin'ny firenena, manatanteraka ny asany nefa koa mandoa hetra. Ny mpanjaka dia nipetraka tao amin'ny fitokana virtoaly tao amin'ny Versailles, ny azy fitondram-panjakana mpieritreritra amin'ny teoria fa tsy mahomby amin'ny zava-misy. Ny volam-pirenena dia saika foana, feno ny tsy fahaiza-mitantana, tsy mahomby, kolikoly, manambany ny fandaniana sy fandraisana anjara amin'ny ady avy any ivelany.
Tamin'ny faramparan'ny 1780, ny minisitry ny mpanjaka dia nitady mafy ny hanatanterahana ny fanavaozana ara-bola. Ny nanomboka ny fifanolanana momba ny fanavaozana hetra tsy ela dia nanjary hetsika ho amin'ny fanovana ara-politika sy ny lalàmpanorenana. Fifandonana amin'ny Estates-General tamin'ny tapaky ny 1789 dia nitondra ny fananganana Antenimieram-pirenena, ny voalohany amin'ireo governemanta revolisionera marobe. Ireo fisehoan-javatra ireo, tsy nisy fandrahonana na fandatsahan-dra dia nanolo-kevitra fa mety hisy ny tetezamita milamina. Nandritra ny herinandro ho avy, onjam-panoherana malaza - any Paris, any ambanivohitra ary amin'ny Versailles tenany - fanamarihana amin'ny fiovan'ny rà ho avy.
Ny tranokalan'i Alpha History's Revolution dia loharanom-pahalalàna boky momba ny kalitao feno fandalinana amin'ny fandalinana ny hetsika any Frantsa any amin'ny 1700 tara. Misy loharano voalohany sy loharano voalohany ihany ao amin'ny 500, ao anatin'izany ny antsipiriany famintinana lohahevitra, antontan-taratasy ary sary mampiseho sary. Ny tranokalanay dia misy ihany koa ny fanazavana momba ny sari- ary sarintany momba ny foto-kevitra, Tantara amin'ny, glossaries, dia iza no ary fampahalalana momba historiography ary mpahay tantara. Ny mpianatra dia afaka manandrana ihany koa ny fahalalany ary mampatsiahy azy ireo amin'ny hetsika an-tserasera marobe, anisan'izany Quizzes, crosswords ary wordsearches.
Raha ny loharanom-baovao fototra, ny votoatiny rehetra ao amin'ny History History dia nosoratan'ireo mpampianatra, mpanoratra ary mpahay tantara mahay. Ny fampahalalana bebe kokoa amin'ity tranokala ity sy ireo mpandray anjara dia mety ho Hita eto.
Ankoatry ny loharanom-baovao fototra, ny votoatiny rehetra amin'ity tranonkala ity dia © Alpha History 2018-19. Ity atiny ity dia tsy azo adika, naverina navoaka indray na tsy misy alalana avy amin'ny alalàn'ny Alfa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana ny tranokalan'i Alpha History sy ny atiny, azafady zahao ny momba anay Fepetra fampiasana.